ည ၁၁ နာရီလောကျမှာ ဖုနျးဒိုငျး ဆိုတဲ့ အသံအကယျြကွီး ကွားပွီးတဲ့ နောကျ – စှယျစုံသုတ
ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Naung Naung Kyaw ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လူတိုင်း သိရှိပြီး သတိထားမိစေဖို့ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်….
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို အားလုံးသိစေဖို့ အားလုံး သတိထားကြမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ည ၁၁ နာရီ ၄ မိနစ် ကျွန်တော် တို့ အိပ်ခန်းထဲ က Air Con စဖွင့် ပြီး ၁ မိနစ်လောက် အကြာ မှာ ဖုန်း ဒိုင်း ဆိုတဲ့ အသံ အကျယ်ကြီး နဲ့ ပေါက်ကွဲ သံ စကြား ရပြီး မီးလောင်တော့ အခန်းထဲမှာ သမီးက
တစ်ယောက်ထဲ ကလေးဆော့ တဲ့ အသံမည် Laptop နဲ့ သီချင်းတွေ ဖွင့် နေတော့ AirCon ပေါက်ကွဲ မီးလောင်သံ ကို သူ့ရဲ့ laptop သီချင်းသံ လို့ ထင်မိ သေးတာ ကျွန်တော် က ထမင်းစား ခန်းထဲ မှာ ရေနွေး သောက် နေတာပါ ၅ စက္ကန့် လောက် နေတော့ ကျွန်တော် ရိပ်မိ လာတယ်
အသံမည် ပုံက ပုံမှန် မဟုတ်တာကို အခန်းထဲ ပြေးသွားပြီး ကြည့်တော့ AirCon က မီးလောင်ပြီး မီးခိုးတွေ အင်မတန် ထွက်နေပြီ သမီးက သူ့ ရဲ့ ကစားစရာ laptop ကနေ မျက်နှာ မခွာ နိုင်အောင် စိတ်ဝင်စား နေတယ် မီးတောက် က သူ့ ခေါင်းပေါ် မှာ သူ မသိဘူး
ကျွန်တော် တို့ မိသားစု ကံကောင်းတာ က5years guarantee2KG မီးသတ် ဆေးဘူး ဝယ်ဆောင်ထားပြီး မီးလောင်ရင် အဲဒီ ဆေးဘူး ကို ဘယ်လို အသုံးပြု ရသလဲ ဆိုတာ အိမ်သူ အိမ်သား အားလုံး ကို ၃ ၄ ခါ သင်ကြား ပြသ ပေးထါးတာရယ်…
အိပ်ခန်းရဲ့ မျက်နှာကျက် ကို ကျောက်ပြား AC Sheet နဲ့ မိုးထားမိတာပါ…
အိပ်ခန်း က လွဲလို့ တစ်အိမ်လုံး Ceiling Sheet installation ကို Aluminum composite ပြားတွေနဲ့ မိုးထားမိတာပါ။
အိပ်ခန်း သာ AC Sheet မမိုးထားမိရင် ကျွန်တော် တို့ မိသားစု ၃ ယောက်စလုံး အိပ်ပျော် နေချိန် ကျမှ မီးလောင် ခဲ့ရင် အသက် အန္တရာယ်များ လွန်းပြီး နိုးလို့ ငြိမ်း လို့ မနိုင် လို့
လူလွတ်အောင် ပြေးရရင် အိမ်ဆုံးရှုံးပြီး အိမ်ထောင်ဦးစီး ကျွန်တော် က ထောင်နန်းစံ ရမှာပါ ဒီလို AirCon မီးမလောင်ခင် ၃ ရက်လောက်က အဲကွန်းက အနံ့ဆိုး တွေ ထွက်သေးတယ်
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် က gasoline generator တစ်နေကုန် နှိုးထားပြီး အလုပ် လုပ်လို့ အဲဒီ ဓာတ်ဆီ မီးစက် က ထွက်တဲ့ ကာဗွန်မိုနော့ဆိုက် အငွေ့အသက်တွေ ကို AirCon ရဲ့ outdoor unit က
တနေကုန် စုပ်ယူ ထားလို့ သာ indoor unit က အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်တယ် ထင်ပြီး AirCon services ကို ခေါ်မပြမိဘူး
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ဆွေမျိုး တွေနဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ ကို့ ကျွန်တော် တို့အိမ် ရဲ့ AirCon မီးလောင်မှု အား သင်ခန်းစာ သတိပြု ဆင်ခြင်နိုင် ပါရန် အားလုံး အကျိုးရှိစေမယ်ထင်လို့ မျှဝေပါ တယ် ခင်ဗျာ
ဒီနေ့ ည အဖို့ တော့ AirCon အေးအေး လေးနဲ့ အိပ် လိုက်ပါ ဦးမည် ။
အိပ်ခန်းထဲ လည်း မီးသတ် ဆေးဘူး ထဲက powder မှုန့် တွေ ပွထပြီး အလွန်မွေးပျံ့ နေလေရဲ့
ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန် မီးသတ်ဆေးဘူး ၃ ဘူး ထပ်ဝယ်ပြီး ဆောင်ထားမှ အင်းစိန်ထောင်နဲ့ ဝေးပါမည်။
အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ညချမ်းပါ
Credit – Naung Naung Kyaw
ဒီအကွောငျးအရာလေးကတော့ လူမှုကှနျယကျအကောငျ့ပိုငျရှငျဖွဈတဲ့ Naung Naung Kyaw ဆိုတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျမှ ကိုယျတိုငျ အိမျမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျတဈခုကို လူတိုငျး သိရှိပွီး သတိထားမိစဖေို့ တငျပွထားခွငျးဖွဈပါတယျ….
အဆိုပါအဖွဈအပကျြကို အားလုံးသိစဖေို့ အားလုံး သတိထားကွမိစဖေို့ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေးပေးလိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ။
ည ၁၁ နာရီ ၄ မိနဈ ကြှနျတျော တို့ အိပျခနျးထဲ က Air Con စဖှငျ့ ပွီး ၁ မိနဈလောကျ အကွာ မှာ ဖုနျး ဒိုငျး ဆိုတဲ့ အသံ အကယျြကွီး နဲ့ ပေါကျကှဲ သံ စကွား ရပွီး မီးလောငျတော့ အခနျးထဲမှာ သမီးက
တဈယောကျထဲ ကလေးဆော့ တဲ့ အသံမညျ Laptop နဲ့ သီခငျြးတှေ ဖှငျ့ နတေော့ AirCon ပေါကျကှဲ မီးလောငျသံ ကို သူ့ရဲ့ laptop သီခငျြးသံ လို့ ထငျမိ သေးတာ ကြှနျတျော က ထမငျးစား ခနျးထဲ မှာ ရနှေေး သောကျ နတောပါ ၅ စက်ကနျ့ လောကျ နတေော့ ကြှနျတျော ရိပျမိ လာတယျ
အသံမညျ ပုံက ပုံမှနျ မဟုတျတာကို အခနျးထဲ ပွေးသှားပွီး ကွညျ့တော့ AirCon က မီးလောငျပွီး မီးခိုးတှေ အငျမတနျ ထှကျနပွေီ သမီးက သူ့ ရဲ့ ကစားစရာ laptop ကနေ မကျြနှာ မခှာ နိုငျအောငျ စိတျဝငျစား နတေယျ မီးတောကျ က သူ့ ခေါငျးပျေါ မှာ သူ မသိဘူး
ကြှနျတျော တို့ မိသားစု ကံကောငျးတာ က5years guarantee2KG မီးသတျ ဆေးဘူး ဝယျဆောငျထားပွီး မီးလောငျရငျ အဲဒီ ဆေးဘူး ကို ဘယျလို အသုံးပွု ရသလဲ ဆိုတာ အိမျသူ အိမျသား အားလုံး ကို ၃ ၄ ခါ သငျကွား ပွသ ပေးထါးတာရယျ…
အိပျခနျးရဲ့ မကျြနှာကကျြ ကို ကြောကျပွား AC Sheet နဲ့ မိုးထားမိတာပါ…
အိပျခနျး က လှဲလို့ တဈအိမျလုံး Ceiling Sheet installation ကို Aluminum composite ပွားတှနေဲ့ မိုးထားမိတာပါ။
အိပျခနျး သာ AC Sheet မမိုးထားမိရငျ ကြှနျတျော တို့ မိသားစု ၃ ယောကျစလုံး အိပျပြျော နခြေိနျ ကမြှ မီးလောငျ ခဲ့ရငျ အသကျ အန်တရာယျမြား လှနျးပွီး နိုးလို့ ငွိမျး လို့ မနိုငျ လို့
လူလှတျအောငျ ပွေးရရငျ အိမျဆုံးရှုံးပွီး အိမျထောငျဦးစီး ကြှနျတျော က ထောငျနနျးစံ ရမှာပါ ဒီလို AirCon မီးမလောငျခငျ ၃ ရကျလောကျက အဲကှနျးက အနံ့ဆိုး တှေ ထှကျသေးတယျ
ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျော က gasoline generator တဈနကေုနျ နှိုးထားပွီး အလုပျ လုပျလို့ အဲဒီ ဓာတျဆီ မီးစကျ က ထှကျတဲ့ ကာဗှနျမိုနော့ဆိုကျ အငှအေ့သကျတှေ ကို AirCon ရဲ့ outdoor unit က
တနကေုနျ စုပျယူ ထားလို့ သာ indoor unit က အနံ့ဆိုးတှေ ထှကျတယျ ထငျပွီး AirCon services ကို ချေါမပွမိဘူး
ဘာရယျ မဟုတျဘူး ဆှမြေိုး တှနေဲ့ မိတျဆှေ အပေါငျးတို့ ကို့ ကြှနျတျော တို့အိမျ ရဲ့ AirCon မီးလောငျမှု အား သငျခနျးစာ သတိပွု ဆငျခွငျနိုငျ ပါရနျ အားလုံး အကြိုးရှိစမေယျထငျလို့ မြှဝပေါ တယျ ခငျဗြာ
ဒီနေ့ ည အဖို့ တော့ AirCon အေးအေး လေးနဲ့ အိပျ လိုကျပါ ဦးမညျ ။
အိပျခနျးထဲ လညျး မီးသတျ ဆေးဘူး ထဲက powder မှုနျ့ တှေ ပှထပွီး အလှနျမှေးပြံ့ နလေရေဲ့
ဒါပမေယျ့ မနကျဖွနျ မီးသတျဆေးဘူး ၃ ဘူး ထပျဝယျပွီး ဆောငျထားမှ အငျးစိနျထောငျနဲ့ ဝေးပါမညျ။
အားလုံး ပဲ မင်ျဂလာ ညခမျြးပါ
မြန်မာ့ဖိုက်တာကြီး အောင်လ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ချန်ပီယံစိန်ခေါ်ပွဲ ကျင်းပဖွယ်ရှိ